Uyaqhubeka umuga kuDemocratic Alliance - Bayede News
Uyaqhubeka umuga kuDemocratic Alliance
ESIGAMEKWENI esingejwayelekile ngesonto eledlule abaholi beqembu elikhulu kwaphikisayo, iDemocratic Alliance (DA) baphikisane ngesinqumo senqubomgomo esidlangalaleni. Lokhu kudale imibuzo ngobunye kuleli qembu elihlala njalo liveza isithombe sokuthi ezinkingeni ezikhungethe amanye amaqembu lona alithinteki. Indaba ibe ngumvuka wendulo odabeni oluthinta uhlelo lukaHulumeni lokufukula aboHlanga iBlack Economc Empowerment (BEE).
Okumangaze abaningi wukuthi emuva nje kokuvela kwalezi zindaba abaholi abathile kuDA bazame ngakho konke ukulungisa abakubize ‘ngokungabekwa kahle’ kwesinqumo somhlangano. Kuqale umholi wale nhlangano KwaZulu-Natal uMnu uZwakele Mncwango obhoke wakhahlela echitha okushiwo nguNks uNgwenya.
“Sidinga ukuba siqondisane uma abanye bengalimeli ngokuyikho iqembu. Imibiko ethi uMkhandlu Kazwelonke weDA unqume ukulaxaza iBEE njengengxenye yenqubomgomo yayo ayisilo iqiniso.
Emhlanganweni woMkhandlu Kazwelonke, iqembu ladingida futhi labhekisisa imiqondo eminingi yokuthi kungaqalwa kanjani ukwandisa ukutholakala ukufukula ngokomnotho labo ababencishwe amathuba.
“UMkhandlu Kazwelonke manje ususezingeni lokulolonga okomnotho esingakunikeza izakhamuzi zaseNingizimu Afrika futhi akukho kunqubomgomo lapho sichitha khona inqubo kasenzangakhona evulekile ngalabo ababencishwe amathuba,” kubhala uMpangazitha.
Kweminye yemibhalo yakhe uNks uNgwenya uthe: “Ekuqaleni kowezi-2018, umholi weDA, uMnu uMmusi Maimane, wabhala kanje; ‘sidinga uguquko oluphelele lwenqubomgomo yokufukula ngokomnotho, ukuze siziqhelanise nenqubomgomo egxile kubuhlanga evumela ukunothisa omtakabani, siye kunqubomgomo ehlakaza uhlelo olungakhangezisi oselukinatele izigidi zezakhamuzi kububha.”
Uqhube wathi: “Uhlaka oluphezulu lweqembu, uMkhandlu Kazwelonke, lukuqisekisile lokho kuzinikela emhlanganweni walo wokugcina. Isidingo sokuphindela ezimpandeni nasemigomeni yezezomnotho emihle yokubuthanisa umnotho ibonakala esimweni sezomnotho waseNingizimu Afrika.” kuphetha uNks uNgwenya. Omunye umholi we DA uNkz u-Anchen Dreyer uvumelane noNks uNgwenya wachitha uMncwango. UNkz uDreyer uthe njengqapheli ebisemhlanganweni woMkhandlu Kazwelonke uhlaka lwenqubomgomo kaGwen Ngwenya – Ezomnotho Ezivulekile – kwamukelwe ngaphandle kokuphikiswa yiwo wonke umuntu obekhona.
Kuthe emuva kwenkulumompikiswano yamalungu nabanye ngalolu daba, uMnu uJames Selfe onguSihlalo woMkhandlu Kazwelonke washo nje angaba maningi waluvala udaba.
“Isimo seDA ngeBBBEE sicacile. Sikholelwa ekutheni ubuhlanga bulokhu buncike kwabangenamathuba eNingizimu Afrika yanamuhla. Siseka ngokuphelele izinhloso nomoya weBEE. Nokho, sisichitha ngokugcwele isakhiwo seBEE se-ANC. Izigidi zezakhamuzi zaboHlanga zilokhu zincishwe amathuba futhi lesi sakhiwo seBEE se-ANC asisebenzi. Kunalokho sinothise abaxhumene nabepolitiki nomtakabani abambalwa. IDA izokwethula noma isekele iBEE ehlomulisa ngempela izakhamuzi eziningi futhi yenze kube khona indawo lapho kungatholakala khona imisebenzi ngokungenzeleli.”
Iyahlehla inqama: Ayaphuka amakhosana ka-ANC
USelfe umile ekutheni yebo okwamanje iBEE kayihambi kahle ngaphansi kukaKhongolose kepha asikho isinqumo abasithathile sokuba iqedwe njengenqubomgomo.
Amanzi asengene endlini
Okusobala lapha wukuthi kukhona owenze iphutha lokukhuluma into ebisengumkhusu wasekhaya. Okukhulunywa nguMncwango noSelfe akwehlukile kokukhulunywa nguNks uNgwenya, okwehlukile yindlela abakubeka ngayo.
Bonke bayavumelana ukuthi uhlelo olukhona alulungile kepha kubo kukhona abathi aluqedwe manje kepha abanye bayacophelela bathi ake inkulumo ihlelembelwe ngokuyikho ukuze ingalimazi iqembu.
Bayede News Aug 16, 2018